Nhau - Magirazi eDanyang City magirazi ekunze ekutengeserana kubva muna Ndira kusvika Chikumi 2020
Magirazi eDanyang City magirazi ekunze ekutengeserana kubva muna Ndira kusvika Chikumi 2020
Kubva munaNdira kusvika Chikumi 2020, huwandu hwese hwekunze nekutengesa kunze kwemagirazi eDanyang hwaive US $ 208 mamirioni, kuderera kwegore-ne-gore kwe2.26%, kuverengera 14.23% yehuwandu hwekupinza nekutengesa kunze kweDanyang. Pakati pavo, kutengeswa kwemagirazi kwaive US $ 189 mamirioni, kuderera kwegore-ne-gore kwe4.06%, kuverengera 14.26% yehuwandu hwekutengesa kunze kweDanyang; kuunzwa kwemagirazi kwaive US $ 19 miriyoni, gore-gore-gore kuwedzera kwe26.26%, kuverenga 13.86% yehuwandu hwekupinza kukosha kweDanyang.
(Dhata sosi: Zhenjiang Tsika Hofisi muDanyang)
[Dhata] Iyo yekupinza uye yekunze mamiriro ezvinhu emunyika magirazi zvigadzirwa nemhando dzakasiyana kubva muna Ndira kusvika Chikumi 2020
Kubva muna Ndira kusvika Chikumi 2020, China inotengesa kunze kwegirazi zvigadzirwa (kusanganisa zviridzwa nemidziyo) yasvika US $ 2.4 bhiriyoni, kudzikira kwegore-pagore kwe13,95%. Kubva pakuongororwa kwemhando yezvigadzirwa zvemaziso: kuburitswa kwemagirazi ezuva, kuverenga magirazi uye imwe lens yemaziso yaive US $ 1.451 bhiriyoni, kudzikira kwegore-pa-gore kwe5,24%, kuverengera 60.47% yeiyo yakazara (ayo magirazi ezuva akatengeswa aive US $ 548 mamirioni, gore-gore-gore kuderera kwe34.81%, kuverenga 22.84% yeiyo yakazara); Kunze kwenyika kwemafuremu kwaive US $ 427 mamirioni, gore-gore-gore kuderera kwe30.98%, kuverengera 17.78% yeiyo yese; kuburitswa kwema lenses ekuratidzira kwaive US $ 461 mamirioni, gore-gore-gore kuderera kwe15.79%, kuverenga 19.19% yeiyo yose.
Kubva muna Ndira kusvika Chikumi 2020, China inopinza zvigadzirwa zvegirazi (kusanganisa zviridzwa nemidziyo) yaive US $ 574 mamirioni, kudzikira kwegore-pagore kwe13.70%. Yakaongororwa kubva muchikamu cheyemagetsi zvigadzirwa: kuunzwa kwemagirazi ezuva, kuverenga magirazi uye imwe lenzi yaive US $ 166 mamirioni, kuderera kwegore-pagore kwe19.45%, kuverengera 28.96% yeiyo yese;
Kuunzwa kwemafuremu ekuratidzira aive madhora US $ 58 miriyoni, kuderera kwegore-ne-gore kwe32.25%, kuverenga 10.11% yehuwandu; kuunzwa kwemalensi ekuratidzira uye avo akasara aive US $ 170 miriyoni, kuderera kwegore-ne-gore kwe5.13%, kuverengera 29.59% yehuwandu; corneal contact lenses aive US $ 166 mamirioni, gore-gore-gore kuderera kwe1,28%, Kuverengera kwe28.91% yehuwandu.